Matipi Archives - Techip RELAY
Kudzidziswa kwepamhepo: kudzidzira graphic uye vhidhiyo yekugadzira maturuti - Matipi
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Nyamavhuvhu 12, 2020 pa 16:07 PM naKupindura. Iwe unofarira here dhizaini, giraidhi, 3D, mifananidzo, zvakakosha matanho, vhidhiyo? Zvidzidzise mumatanho ekusika, kugadzirisa ...
Wedzera zuva revhiki kubhodhi yebasa padyo newachi - Matipi
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Nyamavhuvhu 11, 2020 pa 14:46 PM necrapoulou. Nenzvimbo dzakasarudzika, Windows 10 hairatidze zuva revhiki mubhokisi rebasa. Gadzira Windows 10 kuratidza ...
Patinopinda muchikamu chechipiri chechikamu chetatu chino cha2020, nyika yebasa haina kumbobvira yawana manyawi akadaro, ichitsvaira zvese kufanozivisa kwegore rakasviba kwazvo muupfumi hwenyika. Pakati pekutambudzika ...
Muvaki weNigeria anogadzirisa magadzirirwo eAfrica
Dhemas Nwoko zvivakwa ndiwo muenzaniso wezvetsika dzakakodzera uye dzakasimba dzichigadzika Africa. Mutaundi reIgbo reIdumuje-Ugboko, kumaodzanyemba-kumabvazuva kweNigeria, mutambi uye mugadziri Demas Nwoko anouya kuhofisi yake muna…
Tsvaga mumwe wako wemweya uchisimbisa pane chiratidzo chako che nyeredzi!
Tsvaga kuti ndeipi chiratidzo nyeredzi mumwe wako mweya unobva pane yako! Munguva pfupi yapfuura, isu takakurudzira kuti uwane kuti ndeipi yekushambira yaunofanira kupfeka maererano neyako nyeredzi chiratidzo uye tinodzoka nhasi nechinyorwa chinosanganisa panguva ino ...
3 maitiro ekuisa zvinhu muchioneka panguva yekunetseka kurwisa
bryamangwanabe Nyamavhuvhu 7, 2020 0
Maitiro matatu ekudzoreredza panguva yekunetseka kurwisa Kuzvidya moyo mutoro chaiwo kune avo vanotambura nawo asi isu tinogona here kubudirira mukubatanidzwazve panguva yekunetseka kurwisa? Trendy inokupa maitiro matatu ...
Kudzidziswa kwepamhepo: kuve nyanzvi mune yetsika yekubira - Matipi
TELES RELAY Nyamavhuvhu 5, 2020 0
Yokupedzisira yakagadziridzwa munaAug 4, 2020 pa18: 45 PM nePePPart. Iwe unoda kuzvidzivirira pachako kubva pakurwiswa necyber uye kutyisidzira kubva kune vanozeza vanopaza mawebhu mukutsvaga data rinorereka, izvo ...
bryamangwanabe Nyamavhuvhu 4, 2020 0
Heano mazano ezvisikwa ekuchengetedza umhutu kure Tsvaga isu mashanu mazano epanyama ekuchengetedza umhutu kure zhizha rino. Ahhh zhizha, isu tese tinobvuma kuti ino ndeimwe yeakanakisa nguva dzegore, kwete…
1 2 3 ... 36 chinotevera